किन खेल्दैनन् अफिज ? - Khelpati
किन खेल्दैनन् अफिज ?
शुक्रवार, फाल्गुन ३०, २०७६ रमेश सुवेदी
गाेल गरेकाे खुसी मनाउँदै मनाङका अफिज । फाेटाे : एन्फा
काठमाडौं । घरेलु फुटबलमा आएका सर्वाधिक उत्कृष्ट स्ट्राइकर मध्यका एक हुन्, आफिज ओलाडिपो ओलावाले । उनी फागुनको पहिलो साता फेरी पुर्व क्लब मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबमा फर्किए ।
गत सिजनकोे सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग र एएफसी कप मनाङबाट खेलेका उनी यस सिजन भने साउदी अरव पुगे । साउदीको लिग सकेर बसेका उनलाई पुन मनाङले क्लबमा अनुबन्धन गर्न सफल भयो ।
मोफसलका गोल्डकप र बैशाखमा तयारी गरिएको राष्ट्रिय लिगका लागि मनाङले अफिजलाई क्लबमा अनुबन्धन गरेको थियो ।
अफिज त्यो समय नेपाल आए, जति बेला धरानमा मनाङले बुढाशुब्बा गोल्डकप खेलिरहेको थियो ।
लगत्तै उनी श्रम स्विकृती लगायत कागजी प्रक्रियामा ब्यस्त थिए । मनाङ समेत बुढाशुब्बा लगत्तै पोखरामा हुने आहा रारा गोल्डकपमा अफिजलाई उतार्न चाहन्थ्यो ।
आहा रारा गोल्डकप अब समापनको संघारमा छ । मनाङ समेत फाईनल पुगेको छ । तर अफिज मनाङको जर्सीमा उत्रन पाएका छैनन् ।
पोखरेली दर्शकको प्रिय क्लब हो, मनाङ । तर मनाङले क्लबमा महङ्गा विदेशी खेलाडीलाई मैदान उतार्न सकेको छैन ।
क्लबले भने कागजी प्रक्रिया नमिलेका कारण उनले खेल्न नपाएको जनाएको छ ।
मनाङले अफिजलाई मोफसलको प्रतियोगितामा दुई महिना र त्यसपछि राष्ट्रिय लिगमा राख्न सकिने बताएको थियो ।
‘उसलाई मोफसलकै लागि भनेर बोलाएको हो । अट्याकमा केहि समस्या हुँदा उसलाई पुनः अनुबन्धन गरिएको हो । तर विभिन्न कारण भन्दै एन्फाले मोफसलमा खेल्न दिएको छैन ।’ मनाङका महासचिव अनिल गुरुङ भन्छन् ।
नाईजेरियन खेलाडी अफिज अहिले पोखरामै रहेर टिमसँग तयारी गरिरहेका छन् । तर खेलको समय भने उनी दर्शक दिर्घामा हुन्छन् ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले भने आफिज यस सिजनको लिग ‘विन्डोज’ मा नेपालमा खेल्न दर्ता नभएको र कागजी प्रक्रिया अन्तराष्ट्रिय सरुवा प्रमाणपत्र (आईटीसी) समेत पुरा नभएको उल्लेख गर्दै खेल्न नपाएको बताएको छ ।
‘अहिले विन्डो ओपन (खेलाडी दर्ता) खुलेको छैन । सिजनको सुरुवातमा दर्ता नभएर हाल मनाङबाट खेल्न नपाएको हो । कागजी प्रक्रिया पुरा भएपछि टिमबाट खेल्न पाउँछ ।’ एन्फा केन्द्रिय सदस्य तथा मोफसल प्रतियोगिता आयोजना समितिका संयोजक विजय घलले खेलपाटीसँग भने ।
मनाङका महासचिव गुरुङ भने एन्फाले सुरुमै नियमावली नबनाउँदा क्लबलाई समस्या भएको बताउँछन् ।
‘एन्फाले लिग अघिनै नियमावली बनाउन पर्ने हो । तर लिग सक्किएपछि नियमावली आयो । जसले गर्दा क्लबलाई समस्या आएको छ । एक प्रकारले नियमावली मनाङलाई मात्रै लाग्ने गरि बनाएको जस्तो देखिएको छ ।’
एन्फाले लिग अघिनै क्लबलाई नियमावली नदिएको भन्दै मनाङ सहितका केही क्लबले लिगको टाईसिट ‘ड्र’नै बहिस्कार गरेका थिए ।
एन्फाले ढिला गरेर लिग अघि र अप्रिल पहिलो साता ‘विन्डो ओपन’ गर्ने प्रचलन ल्याएको छ । एन्फाले नियमावलीमा एक खेलाडीले एकै सिजन एउटै क्लबबाट खेल्ने प्रावधान समावेश गरेको छ ।
कुनै पनि क्लबले एक महिनामा तीनवटा भन्दा बढी मोफसलक प्रतियोगिता खेल्न पाउने छैनन् । यस्तै एन्फाले ऋणमा दुई खेलाडी मात्र क्लबले लिन पाउने प्राबधानमा राखेको छ । बर्षभरी क्लबमा अनुबन्धित खेलाडी अर्को क्लबमा लोनमा जादा पुर्व क्लबबिरुद्ध खेलाडी खेल्न नपाउने प्रावधान नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । सोही कारण मनाङले राष्ट्रिय टिमका युवा स्टार अभिषेक रिजाललाई अनुबन्धन गर्न पाएको थिएन ।
अफिजले गत सिजनको ए डिभिजन लिगमा सर्वाधिक ७ गोल गरेका थिए । आईटीसीको कारण मोफसलमा खेल्न नपाएका अफिजको अनुपस्थितीमा मनाङलाई घाटा हुने देखिएको छ ।
अफिज घरेलु फुटबलमा सर्वाधिक माग रहेको फरवार्ड हुन् । उनले क्लबसंग मासिक करिब दुई लाख रुपैयाँ माग गर्दै आएका थिए । उनलाई मछिन्द्र लगायतका ठुला क्लबले समेत अनुबन्धनको प्रयास गरेका थिए । उनै फरवार्ड खेल्न नपाएपछि मनाङलाई घाटा लाग्ने देखिएको हो । उनी मैदान फर्कन अप्रिलको पहिलो सातामै कुर्नुपर्ने देखिएको छ ।